कथा : नैकापे सर्किनी « Janata Samachar
यो तीन महिनाभरिमा मैले अध्ययन गरेको जीवनमा कति नीरस, कति पट्यारलाग्दो ? ऊ त्यो त्यही नैकापे सर्किनीको जीवन मरुभूमिको दुष्कर यात्रा जस्तो जीवन, अझ त्यो भन्दा कठिन । मरुभूमिमा त कमभन्दा कम कतै ‘ओएसिस’ हुन्छ भन्ने आशा हुन्छ, यहाँ त्यो पनि छैन । नैकापे सर्किनीको निम्ति जीवन खालि बाँच्दै जानु, बाँच्दै जानु जबसम्म मर्दैन । यो बाँच्दै जानुभित्र उसका केही दैनिक क्रियाकलापहरु रुटिनबद्ध छन् । बिहान अँध्यारैमा उठ्नु, दुखको मानु पकाउनु र आफूमाथि आश्रित आपांग लोग्नेलाई खुवाउनु । त्यसपछि विष्णुमतीको बगरमा बालुवा झिक्न जानु, साँझ आउनु, पकाउनु, लोग्नेलाई खुवाउनु अनि सुत्नु मुर्दा जस्तै ।
यस अवधिभरि ऊ कसैसँग बोल्दिन सिवाय त्यो बालुवा अर्डर गर्ने साहूसँग उही पनि चार शब्द त्यसपछि संवाद सिद्धिन्छ । ऊभित्र मान्छेको भाषा एक किसिमले मरिसकेको छ, जति ज्युँदो छ त्यसको कुनै अर्थ छैन । भाषा मात्र होइन ऊभित्र मान्छेप्रति हुने सहानुभूति र मान्छेबाट आउने त्यसको प्रतिदान दुै मरिसकेको छ । उसको लोग्नेले उसलाई शारीरिक रुपमा माया पनि गर्न सक्दैन र घृणा पनि गर्न सक्दैन, त्यसैले उ सर्किनीलाई भाषाले पिट्छ, आँखाको अभिव्यक्तिले बलात्कार गर्छ र शब्दले लात हान्छ ।
एउटा अति विवश मान्छे हो सार्की तर आफ्नो विवशताप्रति ऊ एकरत्ति सचेत छैन । त्यसैले सर्किनी घृणा गर्छे उसलाई । सार्की निर्दयी छ सर्किनीप्रति, यसैबाट सर्किनीले अन्दाज लगाएकी छ कि उसको लोग्ने आफ्नो विवशताप्रति सचेत छैन ।
हुदाँ–हुदै यौनको चाहना पनि सर्किनीसँग छैन । सायद ऊभित्र मर्ने प्रवृतिहरुमा यो प्रवृत्ति अन्तिम हो । ऊ मस्त तरुनी छँदा नै बिहे भएर आएकी थिई, तर पारिवारिक जीवनको एक वर्षभित्रै ऊ अधबैंसे भइहाली र आज अधबैंसे भइहाली र आज अधबैंसे हुनुपर्नेमा ऊ बूढी भइसकेकी छे ।
मंसिर, पुस, माघ भनेको शीत, तुषारो र ठिहीको महिना हो । यतिखेर सिरक पन्छाएर मुख देखाउन घामले पनि गाह्रो मान्छ । ऊ बिहानी धेरै लामो सयमसम्म सुतिदिन्छ उही पनि भुवाको कोट लगाउँछ, तर नैकापे सर्किनी ऊ, त्यही लुगा लगाएर आउँछे, जो उसले जेठ महिनामा लगाएकी थिई । नैकापे सर्किनीलाई घामको अस्तित्वप्रति शंका लाग्छ, आजभोलि । उसको समय अन्धकार हो । फेरि ऊ अँध्यारोदेखि नै घुँडासम्म पानीमा डुबेर बालुवा निकाल्दै थुपार्दै गरिरहेकी हुन्छे र आफै पनि बालुवा जस्तै निर्जीव र चिसो भइसकेको हुन्छे ।
त्यसैले जाडोको खुराकको ह्यांगओभर पचाइ फरको कोट लाएर बाह्र बजेतिर ढल्कँदै आउने घामले उसलाई कतैबाट छुँदैन । उसको चिस्याइले चुनौती दिन्छ, घाम भाग्छ हानेर ।
यसरी धेरै धेरै बोधहरुबाट सर्किनी निर्लिप्त हुँदै गइरहेकी छे । यस्तीलाई तपस्विनी पनि भन्न सकिन्छ कि ? भैगो विशिष्ट शब्द तपस्यालाई हिलोमा नउतारौँ अथवा सर्किनी तपस्या शब्दभन्दा माथि पनि हुनसक्छे ।
धर्मको नाउँमा मन्दिर धाउने एकजना महानुभावले एकदिन उसलाई प्रश्न गरेको थियो, ‘अलिक घाम छिप्पिएर त आउनु, यो बगरको बालुवा कहाँ भाग्छ र ?’ उसको कुनै प्रतिक्रिया जनाइन, माने उसको जीवन यस्तो यातनागृहमा कैद छ, जहाँ अब उसले मान्छेको भाषा बुझ्न छोडिसकेकी छ ।
नेपाली महिलाहरुको आँखाको मुस्कान चोर्न आउने एकजना टुरिष्टले उसको पनि फोटो खिच्यो एक दिन, उसको नीरस अभिव्यक्तिको फोटो । यो पनि उसले थाहा पाइन । एकैचोटि एउटा सेतो अग्लो, खैरो कपाल भएको मान्छे उसको अघि उभिन आइपुग्दा पो उ झसँग भई ।
‘वान्ट मनी ?’ यसो भन्दै टुरिष्टले पाँच रुपैयाँको नोट उतिर बढायो । उसको एकरस जीवनको अनौठो मुख फेराइ थियो यो घटना…तर त्यो अनुभूति अति छोटो भयो, त्यसलाई कुनै अनुभूति नभने हुन्छ । त्यो पाँच रुपैयाँको नोट पोल्टोभित्र तह लाउँदा उसले आफ्नो अपांग लोग्नेलाई झल्याँस्स सम्झी, यो फाल्तु पैसा ऊकहाँ भएको एकदम थाहा पाइनु हुँदैन, ऊ निकै सचेत रहनु पर्नेछ । आफ्नो पैसा नभएकै अभिनयप्रति, नत्र उसको लोग्नेले रक्सी खानको निम्ति याचना गर्नलाई एउटा शब्दकोश खर्च गर्नुपर्नेछ । सर्किनीलाई शब्दको ओइरोदेखि घृणा छ ।
यो तीन महिनाभित्रमा देशले निकै ठूलाठूला राष्ट्रिय पर्वहरु मनाइसकेको छ । यही पुलमाथिबाट संविधान दिवसको जुलुस बगेका थियो । धिमेबाज, ब्याण्डबाजा, नारा, झाँकी तर नैकापे सर्किनीले केही देखिन, केही सुनिन पनि । ऊ एकनासे बालुवा निकाली रही । विकासको नारा र झाँकीसँग उसलाई कुनै पनि मलतब छैन । अस्तित्वमा भएका वस्तुहरुसँग उसको तात्पर्यको कडी क्रमश टुक्रिँदै छ भने नभएकाहरुसँग…के असम्भव ? बोक्रे धाक त अर्काको पसिना खानेले मात्र लगाउन सक्छ, सर्किनीले सक्दिन ।
साँझ चार बजे ऊ बालुवाको धापबाट निस्कन्छे, फलाम जस्तै चिसो र कठोर भएर । त्यो थुपारिएको बालुवाको खात ठीक उसको जीवनको प्रतीक हो रसहीन र रुखो । चार शब्दमा उ हरियो लसुन र मकैको पीठो किन्छे र यन्त्रचालित जस्तो पाटीमा पर्कन्छे । छोटो दिन झमक्क रात पर्छ पाँच बजे । सर्किनी आएर खाना पकाइसकेको अन्दाज गरेपछि सार्की फर्कन्छ पाटीमा । घस्रन सक्ने ठाउँसम्म उ जान्छ, दिनभरि तास खेल्छ राति यसरी मिस्तिष्कभरि हार, झगडा र हनिताभासको धुवा बोकेर फर्कने गर्छ ।
धन्धा सिद्धिएपछि चिसै लुगामा सर्किनी एकातिर गुँडुल्किन्छे । निर्धक्क सुत्छे ऊ आजभोलि । डर नाउँ गरेको बोध पनि त हुँदैन उसलाई, हुनुको नियतिको फाइदा उठाएर त्यतैको एकजना ठगी खाने भिखारी उसलाई लुट्न त्यहाँ पसेको थियो । सर्किनीले थाहा पाई, यो यसको अस्मिताको प्रश्न थियो । यहाँ भाषा र शब्दसँग होइन एउटा बलिष्ट र सिंगो लोग्ने मान्छेको शरीरसँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । यो अर्कै किसिमको आक्रमणकारीतिर हानी । छल्दा–छल्दै पनि छल्न सकेन भिखारीले । ठिहिर्याइरहेको हातमा लागेको प्रहार सहन नसकेर रन्थनिँदै ऊ भाग्यो, त्यसपछि फर्केर आएन ।
रातभरि सपनामा पनि ऊ बालुवा झिकेको देख्छे । यसरी नैकापे सर्किनी इन्चइन्च गर्दै सिद्धिँदै छे । उसको हाड, मासु, रगत राजधानीको कुनै निर्माणाधीन भवनमा जम्मा हुँदै छ बिना कुनै मूल्य, बिना कुनै कागज–पत्र ।
(धवलागिरी वर्ष २, अंक १,२,३ संयुत्तांक २०३९ मा प्रकाशित प्रस्तुत कथा हामीले पूर्ण इन्फादाको संकलन तथा सम्पादन रहेको पारिजातका प्रतिनिधि कथाहरु पुस्तकबाट साभार गरेका छौं । –सम्पादक)